Ma Kooxdaada Oo Ku Guulaysata Champions League Mise Qarankaaga Oo Koobka Aduunka Ku Guulaysta? Jamaahiirta Kubbada Cagta Oo Kala Go’aamiyay. – GOOL24.NET
Ma Kooxdaada Oo Ku Guulaysata Champions League Mise Qarankaaga Oo Koobka Aduunka Ku Guulaysta? Jamaahiirta Kubbada Cagta Oo Kala Go’aamiyay.
Isbarbar dhiga kubbada cagta heerka kooxeed iyo heerka qaran ayaa u muuqata mid gabi ahaanba isbadal wayni uu ku yimid iyada oo jamaahiirta kubbada cagta aduunku hadda u muuqda kuwo xiisaha ugu badan siiya in ay daawadaan kulamada ay kooxuhu ciyaaraan halka ay xiiso hooseeya ku daawadaan kulamada caalamiga ah xataa haddii uu koobka aduunka yahay.
Waxay taasi keentay in lays barbar dhigo koobka kooxaha Yurub ee UEFA Champions league iyo koobka aduunka midka ay jamaahiirta kubbada cagta jeclaan lahaayeen in ay kooxahoodu ama xulalka qaramadoodu ku guulaystaan.
Codbixin lagu sameeyay shabakada GMS ayaa jamaahiirta kubbada cagta aduunka lagu waydiiyay laba su’aalood oo israacsan oo ah midka ay jeclaan lahaayeen in kooxahoodu ku guulaystaan koobka UEFA Champions league ama in xulalka qaramadoodu ku guulaystaan koobka aduunka.
Laakiin waxaa cajiib noqotay in xiisaha dhabta ah ee tartamada koobka aduunka iyo UEFA Champions league iyo waxa ay xaqiiqo ahaan jamaahiirtu jecel yihiin ay yihiin wax kala duwan. Haddii markii hore la filayay in jamaahiirta kubbada cagtu ay door bidi doonaan UEFA Champions League oo ay kooxahoodu ku guulaystaan, waxaa soo baxday natiijo gabi ahaanba ka duwan.
Su’aalaha codbixintan lagu sameeyay ayaa isdan u dhignaa: “Midkeed jeclaan lahayd: Qarankaaga oo koobka aduunka ku guulaysta mise kooxdaada oo Champions League ku guulaysata?”.
Kadib markii ay in ka badan 70,000 kun oo jamaahiirta caalamka ahi ka qayb qaateen codbixintan waxaa ka soo baxday jawaabta dhabta ah iyo waxa ay jeclaan lahaayeen iyada oo cod aqlabiyad ah oo waliba cajiib ah lagu doortay in ay jeclaan lahaayeen xulkooda oo koobka aduunka ku guulaysta.
Booqlkiiba 74% ka mid ah taageerayaasha 70,000 kun ka badan ee codbixintan ka qayb qaatay ayaa ku jawaabay in ay jeclaan lahaayeen xulalkooda oo koobka aduunka ku guulaysta taas oo loo arko ay xalisay doodii waqtiyadii ugu danbeeyay soo jirtay ee kubbada heerka kooxeed iyo heerka qaran.
Laakiin boqolkiiba 26% aan ka mid ah taageerayaasha kubbada cagta aduunka ee codbixintan ka qayb galay ayaa u codeeyay in ay xulka qarankooda oo koobka aduunka ku guulaysta ay ka jeclaan lahaayeen kooxahooda oo UEFA Champions League ku guulaysta.
Haddaba akhriste, adiga ahaan haddii aad su’aalahan si toos ah uga jawaabto, xulkaaga oo koobka aduunka ku guulaysta iyo kooxda aad taageerto oo UEFA Champions League ku guulaysata midkeed jeclaan lahayd?.
Xulkeega ayaan jeclaa lahaa